I-Taoism / Daoism * yinkcubeko yezenkolo ezihlelekile eziye zavela kwiintlobo ezahlukahlukeneyo eChina, nakwezinye indawo, iminyaka engaphezu kwe-2,000. Iingcambu zaso e-China zikholelwa ukuba zikholelwa kwizithethe zikaShamanic ezazingaphambi kweHsia Dynasty (2205-1765 BCE). Namhlanje iTaoyi ingabizwa ngokufanelekileyo inkolo yehlabathi, kunye nabalandeli bevela kwiinkalo kunye nenkcubeko. Ezinye zala magqirha zikhetha ukusebenzisana neetempile zaseTaoist okanye ii-monasteries, oko kukuthi iinkqubo ezisesikweni, ezilungelelanisiweyo, iziko lokholo.
Abanye bahamba ngendlela yokuzimela ngokuzimeleyo, kwaye kunjalo, abanye bayamkela imiba yombono wehlabathi weTaosi kunye / okanye iinkqubo ngelixa begcina uxhulumaniso olusemthethweni kwelinye inkolo.
Umbono wehlabathi weTaosi ususelwe ekuqwalaselweni okufutshane kwimizekelo yenguqu ekhoyo kwihlabathi lemvelo. Igosa leTaoist liyaqaphela indlela ezi zibonakalisa ngayo ezi ziphathekayo njengendawo yethu yangaphakathi nangaphandle: njengomzimba wethu, kunye neentaba nemilambo namahlathi. Isithethe seTao sisekelwe ekuhambeni ngokuhambelanayo kunye neepatheni zokutshintsha. Njengoko ufezekisa ulungelelwaniso olunjalo, ufumana ukufikeleleka kobuchule, kwakhona, kumthombo weepateni: ubunye obukhulu obuvela kuyo, ogama linguTao . Kule ngongoma, iingcamango, amazwi kunye nezenzo zakho ziya kudla, ngokukhawuleza, ukuvelisa impilo kunye nolonwabo, wena kunye nosapho lwakho, uluntu, umhlaba kunye nangaphezulu.
ULaozi kunye noDaode Jing
Umntu ogqwesileyo kunazo zonke weTaoism yiLaco (History of Lao), kunye noLood Jing (Tao Te Ching) . Ingqungquthela kukuba uLaozi, ogama lakhe lithetha "umntwana wasendulo," wachaza iindinyana zikaDaode Jing kumgcini wesango elinezantsi laseChina, ngaphambi kokunyamalala ngonaphakade kwilizwe lama-Immortals.
I- Daode Jing (iguqulelwe apha nguStephen Mitchell) ivula ngeendlela ezilandelayo:
I-tao engachazwayo akuyiyo iTao yaphakade.
Igama elingabizwa ngokuba ligama lingunaphakade.
Ukungaqiniseki nguyonyani ngonaphakade.
Ukubiza igama liyimvelaphi yazo zonke izinto ezithile.
Enyanisweni kweli qalo , i- Daode Jing , njengezibhalo ezininzi zaseTaoist, iguqulelwe ngolwimi olutyebileyo, isiqulatho, kunye nezibongo: izixhobo zombhalo ezivumela ukuba itekisi ibe yinto ethi "umunwe ubhekisela kwinyanga." Kwamanye amagama, isithuthi sokusithumela kuthi - abafundi balo - into ekugqibeleni ayinakutsholwa, ayikwazi ukwaziswa ngengqondo engqiqo, kodwa iyakwazi ukufumana intuitively kuphela. Oku kugxininiswe ngaphakathi kweTaoism yokuhlakulela iifomu ezingenayo ingqiqo yolwazi kubonakala nakubuninzi beengcamango kunye neefigong iifom - iindlela ezijolise ekuqapheliseni kwethu ukuphefumla nokuhamba kwe- qi (amandla ophila) ngemizimba yethu. Kuye kuboniswe kwisenzo seTaoist sokuthi "singadlibalalanga" kwihlabathi lezemvelo - umkhuba osifundisayo indlela yokunxibelelana nemimoya yemithi, amatye, iintaba kunye neentyantyambo.
Isithethe, Ukuhlengahlengwa, ubuGcisa kunye neMicrothelo
Ngokwezenzo zalo zenkcubeko - imicimbi, imikhosi kunye nemikhosi eyenziwe ngaphakathi kweetempile kunye neendwendwe - kunye neendlela zangaphakathi ze-yogic kunye ne-yoginis, izithethe zaseTaoist ziye zavelisa ezininzi iinkqubo zokubhula, kuquka neYijing (I-ching ), feng-shui, kunye neenkwenkwezi; ilifa lezakhono zobutyebi, isib. imbongo, ukudweba, i-calligraphy nomculo; kunye neenkqubo zonyango.
Akumangalisi ke ukuba kukho ubuncinane iindlela ezili-10,000 zokuba "ngumTaoist"! Nangona kunjalo ngaphakathi kwabo, bonke banokufumana iinkalo ze-Taoist-view view-intlonelo ejulile kwihlabathi lemvelo, uvelwano kunye nokubhiyozela iipatheni zalo zenguqu, kunye nokuvula okubonakalayo kwiTao engabonakaliyo.
Inqaku lokuguqulela : Kukho iinkqubo ezimbini ezisetyenziswayo ngoku ku-Romanizing abalinganiswa baseTshayina: inkqubo ye-Wade-Giles endala (umzekelo "iTaoism" kunye "chi") kunye nenkqubo entsha ye-pinyin (umz. "Daoism" kunye ne "qi"). Kule website, uza kubona ngokutsha iinguqulelo ze-pinyin. Okunye okuphawulekayo kukuthi "iTao" kunye ne "Taoism," eyaziwa ngokuqhelekileyo kunokuba "Dao" kunye no "Daoism."
Ukufunda Okuphakanyisiweyo: Ukuvula Isango Lobunzima: Ukwenziwa kweeWayoist Wizard nguKen Kaiguo & Zheng Shunchao (eguqulelwe nguTomas Cleary) uxela ibali lobomi likaWang Liping, umgca wesizukulwana se-18 kwisiGqeba seSango senyoka Gcwalisa isikolo seTaoism esikolweni, sinika umdla othakazelisayo nonomtsalane wesifundo somfundi waseTaoist.
Biography kaGregor Mendel
Ukukhupha kwi-Gloss okanye Shine kwi-Painting
IYunivesithi yaseNebraska i-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data